အဘယ်သူ၏ပင်လယ်နက်ကမ်းခြေအရှည်နီးပါး 400 ကီလိုမီတာအထိရောက်ရှိဘူလ်ဂေးရီးယား, ပူပြင်းရာသီအတွက်အပန်းဖြေဖို့လုံလောက်သောအခွင့်အလမ်းပေးထားပါသည်။ သို့သော်များစွာသောမိဘများဘူလ်ဂေးရီးယားကလေးများနှင့်အတူအပန်းဖြေဖို့ သာ. ကောင်း၏ဘယ်မှာစိုးရိမ်ပူပန်ကြသည်။
ဆိတ်ငြိမ်တဲ့, ငြိမ်းချမ်းတဲ့အပန်းဖြေစခန်း - တစ်အကြိုက်ဆုံးကလေးနဲ့အတူအပန်းဖြေဘို့ဆိပ်။ သာယာလှပအလှတရား၏အံ့ဖှယျကဝိုင်းတစ်ဦးရင်ခုန်စရာလေထုနှင့်အတူရှေးဟောင်းမြို့တစ်ဦးကောင်းစွာဖွံ့ဖြိုးပြီးအခြေခံအဆောက်အဦများရှိပါတယ်။ အဓိကကမ်းခြေတွင်တစ်ဦးနူးညံ့သိမ်မွေ့ဆင်ခြေလျှောရှိပါတယ်, ဒါကြောင့်ကောင်းစွာတပ်ဆင်ထားတဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ Sozopol ဘူလ်ဂေးရီးယားအတွက်သားသမီးတို့အဘို့လုံလောက်သောဖျော်ဖြေရေးအခွင့်အလမ်းများပေးသည်: မွို့၌သားသမီးရဲ့ကစားကွင်းအစုတခု, ရေဆလိုက်, တစ်ကူးတို့ဘီးလည်းမရှိ။ ခေတ်မီအပန်းဖြေပန်းခြံလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ဟာမိသားစုများ Arkutino Resort ကို4* စန်တာရှိ Marina5* Laguna သဲသောင်ပြင် Resort & Spa4* ဘို့အကြံပြုဟိုတယ်၏။
ရွှေ Sands - ကလေးတွေနဲ့အတူမိသားစုများတိုင်းပြည်အတွက်အကျော်ကြားဆုံးစုံလင်များအတွက်ဘူဂေးရီးယားအပန်းဖြေစခန်းတွေထဲမှာ။ ပင်လယ်ထဲသို့ယင်း၏အဆင်ပြေတိမ်နွယ်ဖွားများနှင့်အတူ, ကြီးစွာသောစစ်တုရင်တစ်ဦး Mini-ရထားနှင့်ကစားအပေါ်တစ်ဦးစိတ်လှုပ်ရှားစရာခရီးစဉ်အပေါ်ငယ်ရွယ်ခရီးသွားဧည့်။ အဲဒီမှာရေဆလိုက်များနှင့်အပန်းဖြေဥယျာဉ်များတဝိုက်စည်းရုံးနေကြပါတယ်။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, အားလုံးအသက်အရွယ်သားရေကိုပန်းခြံ "Aquapolis" အတွက်ပျော်စရာအားလပ်ရက်ခစျြလိမျ့မညျ။ ရွှေသဲစုံတွဲများများအတွက်ဟိုတယ် Gelios SPA ကုမ္ပဏီ & Resort ကို4* Melia ရန်း Hermitage5*4* Mimoza fit ။
သငျသညျအမြိုးသားတို့နှင့်အတူသွားနိုင်ပါတယ်ဘယ်မှာဘူလ်ဂေးရီးယား၌ကြီးသောရာအရပျ, - တိုင်းပြည်၏တောင်ဘက်အပေါ်ဆန်နီသဲသောင်ပြင်အပန်းဖြေစခန်း။ အဆိုပါပင်လယ်အမြဲဝင်ပေါက် sloping ရေကူးလုံခြုံစေသည်မြန်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့ညင်ညင်သာသာပူနွေးလာသည်ဖြစ်ပါတယ်။ အပန်းဖြေနေရာအပြင်, နှင့်ကလေးများရှေးဟောင်းမြို့-ပြတိုက် Nessebar နှင့်စစ်ဆေးရေးခမ်းနားဗိသုကာတစ်ဦးအလည်အပတ်ပျော်မွေ့ပါလိမ့်မယ်။ ကလေးတွေနဲ့အတူမိသားစုများအတွက်အသင့်တော်ဆုံးဟိုတယ် Astoria4* Hrizantema4*4* Strandja စဉ်းစားသည်။
ဤသည်အပန်းဖြေစခန်း - ကလေးတွေနဲ့အတူမိသားစုများအတွက်ပြီးပြည့်စုံသောအရပ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့နီးကပ်၏လေကြောင်းသန့်ရှင်းကျန်းမာနေတဲ့သဘာဝအရံများနှင့်ပင်လယ်ထွက်ညင်သာစွာကျယ်ပြန့် shoreline ။ Little ကခရီးသွားများအတွက်အဆိုပါအပန်းဖြေပန်းခြံ, Mini-အပန်းဖြေပန်းခြံသို့မဟုတ်ရေပန်းခြံ "Akvamaniya" မှာပျော်စရာရပါလိမ့်မယ်။ Laguna4* Orchideya3* Vita Park က3*3* Kom: အပြင်, Albena အတွက်သားသမီးတို့အဘို့ရေပန်းခြံနှင့်အတူဘူလ်ဂေးရီးယားအတွက်အကောင်းဆုံးဟိုတယ်ဖြစ်ကြသည်။
အပန်းဖြေစခန်း၏တစ်ဦးကကြီးမားရှုပ်ထွေးသော Elenite ပုံ Stara Planina တောင်တန်း၏ခွမှာတည်ရှိပြီး။ ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့်စီး, ဝိုင်းလေး, အားကစားဂိမ်းနှင့်ကြီးမားသောရေပန်းခြံစောင့်ဆိုင်းတိတ်ဆိတ်ကလေးများအပြင်၌။
တစ်မိသားစုအားလပ်ရက်တစ်ဦးရဲ့အောင်မြင်မှု, သင်ရယူရန်ရှိသည် ဘူလ်ဂေးရီးယားမှဗီဇာ သူတို့ကိုယ်သူတို့အဘို့အဒါပေမယ့်လည်းသီးခြားစီသားသမီးတို့အဘို့မသာ။
Tretyakov ပြခန်း - ရုပ်ပုံများ
ဗီယက်နမ် - ဆွဲဆောင်မှုများ
ကျူးဘားနှင့်ပတ်သက်ပြီး6ဒဏ္ဍာရီ
မင်းသမီး Beatrice နှစ်သစ်ကူးဆင်နွှဲဖို့အတူတကွဘီလျံနာတစ်ဦးထံမှကမ်းလှမ်းမှုကိုယူ!
Beginners များအတွက် Kamas န္တာန်တိ
တစ်ဦး bechamel ငံပြာရည်ပြင်ဆင်ထားရန်ဘယ်လိုနေသလဲ?
ရေကိုဖဲ့ - ဘာလုပ်ရမှန်း?
သားမွေးနှင့်အတူအမျိုးသမီးများနေ့ဖိနပ် - အနှေးဆုံးသောရသောအချိန်သည်ဆောင်းကာလမော်ဒယ်များ
ဆိတ်နို့ - အန္တရာယ်
တစ်ဦးသူနာပြုမိခင် squash ကြောင့်ဖြစ်နိုင်ပါသလော
အခြောက်လှန်းသင်္ဘောသဖန်းသီး - ကယ်လိုရီ
Wack Tat - စာရွက်
Klimalanin - contraindications
မမြဲသောတဆေးကိုမုန့်စိမ်းအမြန်အစားအစာ - တစ်စာရွက်